Isbaheysiga Sacuudiga oo soo Dhoweeyey Baaqa Cabdalla Saalax
Xulafada uu Sacuudigu hor kacayo ayaa soo dhoweeyey hadal ka soo yeedhay madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax oo xoogagiisu ay dagaal kula jiraan Xuutiyiinta, kaasoo wadahadal ku yaboohay.
Mr Saalax wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay in “bog cusub la furo” haddii isbahaysigu uu qaado xannibaadda, uuna joojiyo weerarrada.
“Waxaan ugu baaqayaa walaalaha iyo dalalka deriska ah iyo isbahaysiga inay joojiyaan weerarka, oo ay qaadaan hareereynta, ayna furaan garoomada dayaaradaha oo ay ogolaadaan in dadka la gaadhsiiyo raashinka gargaarka iyo in la badbaadiyo kuwa dhaawacyada qaba, innaguna waxaan furi doonnaa bog cusub oo ku dhisan deris wanaag” ayuu ku yidhi Mr Saalax Khudbad uu TV ka sii daayey.
Wuxuu codsaday in ‘dhinacyada siyaasadda oo dhan ay bog cusub furaan, lana sameeyo isbahaysi qaran oo sal ballaadhan, kaasoo seeska u dhiga waayo cusub, dadka oo dhamina ay u midoobaan sidii looga hortegi lahaa miliishiyada inqilaabka samaysay’.
Xuutiyiintu way ku gacan saydheen hadalka Mr Saalax. Afhayeen u hadlay ayaa yidhi ‘khudbadda Saalax waa afgambi ka dhan ah isbahaysigii aan wada ahayn, waana mid dibadda soo dhigaysa khiyaanada ay wadaan kuwa sheegaya inay duullaanka ka soo hor jeedaan’.